Sida loo ka Computer Bedelka buug Audio si iPhone aan Lugood | Bedelka buug Audio ka PC
"My iPhone waxaa synced la iMac guriga. Hadda waxaan haystaa safar la MacBook Pro ah. Waxa kaliya oo aan ku soo iibsaday audiobook ka Internet-ka. Waxaan u bedeli karaa audiobook inaan iPhone aan Lugood. Waxaad ogaan, haddii la isticmaalo Lugood, waxaa masixi doono music iyo videos on my iPhone. Ma waxaa jira xal kasta? Fadlan iga caawiyaan helitaanka dhex this.Thanks! "
Haddii aad jeclaan user ee kor ku xusan, waxay u baahan yihiin si ay u gudbiyaan audiobook ah in iPhone ah iyada oo aan la isticmaalayo Library Lugood ah, ka dibna u maleeyeen tahay inaad isticmaasho Wondershare TunesGo Retro. Waa qalab loogu tala galay dadka isticmaala iPhone codaysan ka computer wareejiyo iPhone. Eeg tallaabooyinka hoose si aad buugaag si ay u iPhone wareejiyo la TunesGo Retro .
Download version maxkamad Wondershare TunesGo Retro si ay u gudbiyaan audiobook si iPhone!
In this article, waxaan idinku Arzaaqay version labada tijaabo ee TunesGo Retro (Windows) iyo TunesGo Retro (Mac) . Dooro xaq sida uu nidaamka qalliinka computer aad. Labada iyaga ka mid ah waa ay awoodaan in ay buugaag ka computer wareejiyo iPhone ah. Oo markii aad abuurtaan mid ka mid ah, waxaad ka arki kartaa sida loo isticmaalo. In this article, waxaan qaadan sida loo buugaag si ay u iPhone ah wareejiyo la qalab Windows TunesGo Retro.
Tallaabada 1. Soo ururi aad iPhone la your computer
Si aad u bilaabaan ku wareejinta, waxa ugu horeeyo ee la sameeyo waa in lagu xiro aad iPhone la your computer. Fadlan ha isticmaalin Wi-Fi, laakiin cable USB iPhone. Launch qalab TunesGo Retro isla markiiba ka dib markii la rakibey waa dhameystiran yahay. Waa arki doonaa iPhone oo wuxuu saaray meel uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Ku dar audiobook si iPhone
Riix Media dhinaca bidix ee suuqa ugu weyn. Ka dib waxaa gujinaya, waxaad ka arki kartaa "buugaag" tab ugu sareysa. Waxaa Click to Muujin suuqa kala buugaag ah. Laga soo bilaabo halkan, click Add dooro "Add File" ama "Add Folder". Markaas dhirtuba your computer u buugaag aad rabto in aad nuqul ka si aad iPhone.
In kaliya labaad, waxaad ka heli doontaa in buugaag aad doonayso wareejiyo iPhone. Ka dibna waxaad ku dhagaysan kartaa iyaga on go ah. Bal eeg, siday u fududahay in aad nuqulka buugaag si ay u iPhone. Ka sokow, waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalab TunesGo Retro in ay dib u kor buugaag ka iPhone in computer.
Isku day TunesGo Retro codaysan wareejiyo iPhone hadda!
Raac Tutorial Video ah si ay u gudbiyaan Audiobook ka Computer si ay iPhone
Best iPhone File siladda in View iPhone Files
2 siyaabaha ay u gudbiyaan files ka PC si iPhone
iPhone noqon maayo On - Hel Solutions ka Now!
GOM Player Wixii Mac
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Audiobook ka Computer si ay iPhone aan Lugood